၂၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို နှစ်ဖက်မိသားစုအစုံအလင်နဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ Hailey Baldwin – Trend.com.mm
Happy belated birthday, Mrs. Bieber! နောက်ဆုံးတော့ ယောက္ခမကြီးကလည်း ချွေးမလေးကိုကြည်ဖြူစွာချစ်နိုင်ခဲ့ပြီထင်ပါတယ်။Justin Bieber ရဲ့ အမေ Pattie Mallette ဟာ ချွေးမဖြစ်သူ Hailey Baldwin ရဲ့မွေးနေ့မှာ သူမရဲ့ ကြည်ဖြူမှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၂ရက်နေ့က Hailey ရဲ့ ၂၂နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီး Pattie Mallette ဟာ တွစ်တာမှာ “HAPPY BIRTHDAY @haileybaldwin !! I LOVE YOU!! I’m SO #THANKFUL to have you asadaughter!!!”ဆိုပြီး အသည်းပုံအီမိုဂျီ ၊မွေးနေ့ပူဖောင်းအီမိုဂျီ၊အနမ်းပေးနေတဲ့အီမိုဂျီစသဖြင့် အီမိုဂျီမျိုးစုံထည့်ကာ သူမရဲ့ အချစ်ကိုပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Pattie ဟာ အရင်တုန်းက သားဖြစ်သူရဲ့ရွေးချယ်မှုကို စိတ်ဆိုးခဲ့ပေမဲ့လည်း အခုတော့ Hailey ရဲ့ သည်းခံနိုင်မှု၊စိတ်သဘောထားကောင်းမှု၊သူမရဲ့သားဖြစ်သူအပေါ်အလေးထားချစ်ခင်မှုတွေကို မြင်သွားပြီဖြစ်လို့ ကြည်ဖြူသွားပါပြီ။သူမရဲ့ တွစ်တာပို့စ်အောက်မှာ ပရိသတ်တွေက Hailey လိုချွေးမမျိုးရတာ ကံကောင်းသလို Hailey ကလည်း ဒီလိုယောက္ခမမျိုးရှိတာ ကံကောင်းတာပဲလုိ့ဝမ်းသာကြောင်း Comment တွေရေးသားထားတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။
အခုဆိုရင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာ လက်ထပ်ပြီးစီးလို့အိမ်အသစ်ကိုပြောင်းရွေ့နေထိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။Hailey Baldwin ဟာလည်း နိုဝင်ဘာ ၁၆ရက်နေ့က အင်စတာဂရမ်မှာ “Hailey Bieber” လို့ပြောင်းလဲထားခဲ့ပါပြီ။မွေးနေ့ရက်မှာလည်း နှစ်ဖက်မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်တဲ့။မွေးနေ့မှာအမှတ်တရဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအင်စတာဂရမ်မှာတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက် Justin နဲ့ Hailey တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Happy belated birthday, Mrs. Bieber!
နောကျဆုံးတော့ ယောက်ခမကွီးကလညျး ခြှေးမလေးကိုကွညျဖွူစှာခဈြနိုငျခဲ့ပွီထငျပါတယျ။Justin Bieber ရဲ့ အမေ Pattie Mallette ဟာ ခြှေးမဖွဈသူ Hailey Baldwin ရဲ့မှေးနမှေ့ာ သူမရဲ့ ကွညျဖွူမှုကိုပွသခဲ့ပါတယျ။
နိုဝငျဘာ ၂၂ရကျနကေ့ Hailey ရဲ့ ၂၂နှဈပွညျ့မှေးနဖွေ့ဈပွီး Pattie Mallette ဟာ တှဈတာမှာ “HAPPY BIRTHDAY @haileybaldwin !! I LOVE YOU!! I’m SO #THANKFUL to have you asadaughter!!!”ဆိုပွီး အသညျးပုံအီမိုဂြီ ၊မှေးနပေူ့ဖောငျးအီမိုဂြီ၊အနမျးပေးနတေဲ့အီမိုဂြီစသဖွငျ့ အီမိုဂြီမြိုးစုံထညျ့ကာ သူမရဲ့ အခဈြကိုပွသခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
Pattie ဟာ အရငျတုနျးက သားဖွဈသူရဲ့ရှေးခယျြမှုကို စိတျဆိုးခဲ့ပမေဲ့လညျး အခုတော့ Hailey ရဲ့ သညျးခံနိုငျမှု၊စိတျသဘောထားကောငျးမှု၊သူမရဲ့သားဖွဈသူအပျေါအလေးထားခဈြခငျမှုတှကေို မွငျသှားပွီဖွဈလို့ ကွညျဖွူသှားပါပွီ။သူမရဲ့ တှဈတာပို့ဈအောကျမှာ ပရိသတျတှကေ Hailey လိုခြှေးမမြိုးရတာ ကံကောငျးသလို Hailey ကလညျး ဒီလိုယောက်ခမမြိုးရှိတာ ကံကောငျးတာပဲလို့ဝမျးသာကွောငျး Comment တှရေေးသားထားတာမွငျတှရေ့ပါတယျ။
အခုဆိုရငျ ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျဟာ လကျထပျပွီးစီးလို့အိမျအသဈကိုပွောငျးရှနေ့ထေိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။Hailey Baldwin ဟာလညျး နိုဝငျဘာ ၁၆ရကျနကေ့ အငျစတာဂရမျမှာ “Hailey Bieber” လို့ပွောငျးလဲထားခဲ့ပါပွီ။မှေးနရေ့ကျမှာလညျး နှဈဖကျမိသားစုနဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာကငျြးပခဲ့ပါတယျတဲ့။မှေးနမှေ့ာအမှတျတရဗီဒီယိုလေးတှရေိုကျကူးခဲ့ပွီးအငျစတာဂရမျမှာတငျထားတာတှရေ့ပါတယျ။ပရိသတျတှအေတှကျ Justin နဲ့ Hailey တို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့ ကွညျနူးစရာပုံရိပျလေးတှပွေနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။